ဘလော့ မှတ်စု: ကျွန်တော်နှင့် တီဘီ
“မျက်ကန်းတစ္တေမကြောက်” ဆိုတဲ့စကားပုံလေးကို အားလုံးကြားဖူးကြမှာပါ။ မျက်စိမမြင်တဲ့သူ တစ္တေသရဲ ကိုမကြောက်သလို အန္တရာယ်ရှိမှန်းမသိရင်လည်း အဲဒီအရာကိုအန္တရာယ်လို့မသတ်မှတ်ပဲဖာသိ ဖာသာနေ တတ်တဲ့သဘောပါ။ ကျွန်တော်အခုပြောချင်တာက ကူးစက်လွယ်တဲ့ တီဘီရောဂါအကြောင်းလေးပါ။ အား လုံးသိပြီးဖြစ် သလိုမသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်လည်းဗဟုသုတဖြစ်ရလေအောင် ကျွန်တော့်လိုလည်းမျက် ကန်း တစ္တေတွေ မဖြစ်ရလေအောင် ဗဟုသုတအဖြစ်ရေးသားတင်ပြပေးလိုက်တာပါခင်ဗျာ။
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းရဲ့တူလေးတယောက်ကမလေးရှားရောက်လာတာ ၆ လ၀န်းကျင်သာရှိပါသေးတယ်။ သူငယ်ချင်းကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ လလောက်က တတိယနိုင်ငံကိုအပြီးထွက်သွားကြပြီမို့ သူတို့ကိုယ်စား သူ့ တူ လေးကိုကြည့်ရှု့ထားပေးဖို့အပ်ခဲ့ပါတယ်။ နေတဲ့အိမ်ကလည်းကပ်ရပ်ဖြစ်တာကတစ်ကြောင်း၊ အနေအေး တဲ့ သူမို့လည်း ကျွန်တော်အလွယ်ပဲလက်ခံခဲ့ပါတယ်။ သူနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်သွားရင်အမြဲတမ်းတွေ့နေကြပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့တလလောက်ကတော့ နေမကောင်းဖြစ်လို့ဆေးခန်းသွားပြလိုက်လို့ နေကောင်းသွားပေမယ့်ချောင်း ဆိုးတာတော့ရပ်မသွားပဲ တောက်လျှောက်ဆိုးနေတာတွေ့ရပါတယ်။ သူချောင်းဆိုးနေတာကို ရိုးရိုးချောင်း ဆိုးတယ်ပဲ ကျွန်တော်ထင်နေခဲ့တာပါ။ ထင်လည်းထင်ချင်စရာပါ။ နေပြန်ကောင်းလာပြီးနောက်ပိုင်း အ ချိုတွေ အရမ်းစားသလိုနို့ဆီတွေပေါင်မုန့်တွေ အမြဲစားတာတွေ့လို့ကျွန်တော် တားတောင်ယူရပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူချောင်းဆိုးတာသာမန်လို့ ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တာပါ။ တစ်ရက်မှာတော့ ကျွန်တော့်အခန်းတံခါး လာခေါက်လို့ ကျွန်တော်သွားဖွင့်ပေး လိုက်တော့သူပါ။ မျက်နှာကလည်းဖြူဖတ်ဖြူရော်၊ နှာခေါင်းနဲ့ ၀တ်ထား တဲ့အင်္ကျီ မှာလည်းသွေးစတွေနဲ့မို့ရန်ဖြစ်လာသလားလို့ ကျွန်တော်ထင်မိပါတယ်။ ပုံမှန်ဆို ကျွန်တော့်အိမ်သူ မလာတတ်ပါဘူး။ အခုလိုထူးထူးခြားခြား ရောက်လာတာမို့ “ကျော်ကျော်ဘာဖြစ်လာတာလည်း” လို့ ကျွန်တော်မေးတော့“ ကျွန်တော်ခုနချောင်းဆိုးရင်း သွေးတွေပါလာလို့အကို… နောက်ပြီးခဏ နေတော့ လည်ချောင်းဝမှာ ပျို့ပြီးအန်ချင်လာတယ်… အန်လိုက်တော့ သွေးတွေပဲအကို” လို့ပြောလည်းပြောချောင်း လည်းဆိုးလို့ လက်ဆေး basin မှာသွားပြီးသူ အန်ပါတော့တယ်။ ချောင်းဆိုးလိုက် သွေးအန်လိုက်နဲ့ ကျွန်တော့်အထင် ၁လီတာနီးပါးလောက်ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် တော်တော်လေးစိုးရိမ်သွားသလို သူ လည်းတော်တော်လေးကြောက်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်းချက်ချင်းကေအယ် ကမြန်မာဆေးခန်းကိုပြေးရ ပါတော့တယ်။ ဆေးခန်းရောက်တဲ့အချိန်သူ့အခြေအနေကို ဆရာဝန်ကိုရှင်းပြတော့ ဆရာဝန်ကဘာမှတောင် မစစ်ပါဘူး…“ခင်ဗျားလူနာကိုဆေးရုံသာခေါ်သွားလိုက်ပါ…ကျွန်တော့်ဆေးခန်းအနေနဲ့ တော့ဘာထောက်ခံ ချက်မှမရေးပေးဘူးနော်” ဆိုပြီဆေးရုံကိုသွားခိုင်းပါတယ်။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာတော့ နည်းနည်း စပ်ဖျင်း ဖျင်းဖြစ်သွားပါတယ်။ နားကြပ်လေးနဲ့လူနာကို စမ်းတာလေးတောင်မလုပ်ပါဘူး။ ဆေးရုံကိုတန်း သွားပါတဲ့၊ မသကာသူ့အနေနဲ့ လူနာရဲ့အခြေအနေလေးကို ဆေးစာသဘောမျိုးလေးရေးပေးရင်တောင်လူနာ အတွက် အရေးပေါ်ဌာနကိုသွားဖို့ အများကြီးအထောက်အကူရလို့ ကျွန်တော်ကျေးဇူးတောင်တင်မိမှာပါ။ အခုတော့ မျက်နှာလွဲခဲပစ်သလိုပါ။ နောက်ပြီးလူနာကလည်း တရားဝင်နေထိုင်တာမဟုတ်လို့ သူတို့လုပ်မပေးချင်တာ လားမသိပါဘူး။ အင်း................. ဒါပေမယ့် ဆက်မပြောတော့ပါဘူး။
ဆေးရုံသွားဖို့ကိစ္စ ကျွန်တော် တော်တော်ခေါင်းခြောက်သွားပါတယ်။ လူနာကအိုဗာစတေးနေထိုင်သူမို့ တရားဝင်နေထိုင်ကြောင်း ဘာစာရွက်၊ စာတမ်းအထောက်အထားမှ မရှိတာကတစ်ကြောင်း၊ ဆေးခန်းတစ်ခု ရဲ့ထောက်ခံချက်မပါပဲ ဆေးရုံသွားရင် တော်တော်လေးအခက်ခဲ ဖြစ်တတ်တာကတစ်ကြာင်းမို့ ကျွန်တော် တော်တော်လေးစိတ်ညစ် သွားပါတယ်။ သူ့အတွက်ဆေးခန်းထောက် ခံချက်နဲ့အထောက် အ ထားလေးတခုခုလိုအပ်နေတာအမှန်ပါ။ လူနာကိုကြည့်တော့ သွေးအန်ပြီးသွားရင် ပုံမှန်ပါ။ ချောင်းတော့ မ ကြာမကြာဆိုးပါတယ် သွေးလည်းပါပါတယ်။ သူ့ ကိုဘယ်လိုနေလည်းမေးတော့ ဘာမှမခံစားရကြောင်း၊ နာ တာကျင်တာလည်းမရှိကြောင်း၊ လည်ချောင်းယားပြီး ချောင်းဆိုတာလောက်ပဲလို့ဖြေပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူ့ ကိုအိမ်မှာပြန်နားပြီးနေဖို့ပြောရပါတယ်။ သူ့အတွက်လိုအပ် တဲ့စာရွက်၊ စာတမ်းလေးလုပ်ပေးဖို့ အဲဒီနေ့အဖို့ အချိန်မရတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော်လည်း ညနေဖက်အလုပ်ပြန်ဝင် ရင်းသူ့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရရင် ကောင်း မလည်းလို့ သူငယ်ချင်းတွေ ဆီဖုန်းဆက်မေးကြည့်တော့ သူငယ်ချင်းတယောက်က Puchong (ပူချုန်း) မှာ ရှိတဲ့ မြန်မာအဖွဲ့အစည်းတခု (အမည်များကိုတော့မဖော်ပြတော့ပါဘူး။ မလေးမှာနေတဲ့ လူတော်တော် များ များနဲ UNHCR လက်မှတ်ကိုင်ထားကြတဲ့သူတွေသိကြမှာပါ) မှာအကူအညီ တောင်းကြည့်ပါလား လို့အ ကြံပေးပါတယ်။ နောက်နေ့မနက် ကျွန်တော်အလုပ်ကနေအိမ်ပြန်ပြီး ရေမိုးချိုးပြီး အဲဒီ လူနာကောင်လေး ကိုခေါ် Puchong (ပူချုန်း) ကိုသွားပြီး အဲဒီအဖွဲ့အစည်းကို အကျိုးအကြောင်းပြောလို့ အကူအညီတောင်းရ ပါတော့တယ်။ သူတို့ရှေ့မှာတင် ချောင်းဆိုးပြီးသွေးတွေပါနေတာတွေ့လို့ချက်ချင်းပဲ လိုအပ်တဲ့စာရွက်၊ စာ တမ်း နဲ့သူတို့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ကဒ်တွေ ထုတ်ပေးပါတယ်။ တဆက်ထဲမှာပဲသူတို့က Jalan Padang Belia (Brickfields) မှာရှိတဲ့ (ACTS CLINIC) ကိုသွားဖို့လမ်းညွန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီဆေးခန်းက အခ မဲ့ဆေးကုသပေး တဲ့ဆေးခန်းပါ။ ဆရာဝန်ကလွဲရင် ကျန်ဝန်ထမ်းအားလုံး မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေပါ။ ဒုက္ခ သည်တွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီးဖွင့်ထားတဲ့ အခမဲ့ဆေးခန်းပါ။ ကျွန်တော်တို့လည်း လိုအပ်တဲ့အထောက် အ ထားလေးတွေလည်းရပြီမို့ ကေအယ်မှာရှိတဲ့ အဲဒီ (ACTS) ဆေးခန်းကိုဆက် ပြီးပြေးရပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ တနင်္ဂနွေမို့ ဆေးခန်း ကနေ့ဝက်ပဲဖွင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရောက်တော့ ဆေးခန်းကပိတ်သွားပါပြီ။ “ ကျော်ကျော်နေလို့သက်သာလား... သက်သာရင်မနက်ဖြန်ကျမှလာလိုက်ကြတာပေါ့ ”လို့ ကျွန်တော် ဆိုတော့ ကောင်လေးကနေသာကြောင်း၊ မနက်ဖန်မှထပ် လာမယ်ဆိုတာနဲ့ သူ့ကိုအိမ်ပြန်ပို့ပြီး ကျွန်တော် လည်းအလုပ်ကို တန်းဝင်ရပါတယ်။
မနက် ၈ နာရီခွဲလောက်မှာ ဆေးခန်းရောက်ပါတယ်။ ၉ နာရီမှာ ဆေးခန်းဖွင့်ပါတယ်။ တုံကင်နံပါတ်ယူပြီး ၁၀ နာရီလောက်မှာ ဆရာဝန်နဲ့တွေ့ရပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသား ဆရာဝန်တယောက်လို့ထင်ပါတယ်။ သူကအင်္ဂ လိပ်လို ပြောပါတယ်။ လူနာနဲ့ဆရာဝန်ကြားမှာ စကားပြန်ထားပေးတော့ တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ပြီး သောက်ဆေးပေးပါတယ်။ မနက်ဖန်ပြန်လာပြီး ဓါတ်မှန်ရိုက်ဖို့၊ သွေးစစ်ဖို့ သူ ချိန်းလိုက်ပါတယ်။ အင်း ကျွန်တော်သွားခဲ့တဲ့ မြန်မာဆေးခန်းနဲ့တော့ အပုံကြီးကွာပါတယ် ခင်ဗျာ။ နောက်နေ့ မနက်၁၀နာရီလောက်မှာ ဆေးခန်းမှ အကူကောင်လေးတယောက်ကဦးဆောင်လို့ လူနာတချို့ကို ဓါတ်မှန် ရိုက်၊ သွေးစစ်၊ သလိပ်စစ်ဖို့တ ခြားဆေးရုံတခုကိုခေါ်သွားပါတယ် (ဆေးရုံအမည်ကိုမသိခဲ့ရပါဘူး)။ ညနေ ၂နာရီလောက်မှာ အားလုံးကိစ္စပြီးလို့ ဆေးခန်းကို တခေါက်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ ဆေးစစ်ချက်အဖြေတွေ ကို ဆရာဝန်မှစစ်ဆေးပြီး မနက်ဖန်ပြန်လာရန် ရက်ချိန်းထပ်ပေးပါတယ်။ နောက်တရက်ဆေးခန်းရောက်တော့ ဆရာဝန်မှ ဆေးရုံသို့သွားရန်ညွန်ကြားပါတယ်။ သွားရမယ့်ဆေးရုံကိုလည်း ဆေးခန်းမှလိုက်ပို့ပေးပါတယ်။ Jalan Pahang (ဂျလမ်း ပါဟမ်း) မှာရှိတဲ့ IPR (Institut Perubatan Respiratori) ကိုသွားရပါတယ် …မြန်မာလိုအလွယ်ခေါ်ရရင် အဆုတ်ရောဂါကု ဆေးရုံပေါ့။ အဲဒီမှာတခါ လိုအပ်တဲ့ဆေးစစ်ချက်တွေအပြင်၊ ဓါတ်မှန်ပါ တခါထပ်ပြီး ရိုက်ရပါတယ်။ ၁၁. ၀၅. ၂၀၁၂ ကိုဆေး ရုံကိုလာဖို့ ရက်ချိန်းပေးလိုက်ပါတယ် ။ ဆေး ခန်းမှာပိုက်ဆံမကုန်ခဲ့သလို အခုဆေးရုံမှာလည်း ဓါတ်မှန်၊ သွေးစစ်၊ သလိပ်စစ်အတွက် မလေးငွေ ရင်းဂစ် ၃၀ သာကုန်ခဲ့ပါတယ်။ တော်တော်လေး သက်သာတဲ့နှုန်းထားပါခင်ဗျာ။
ဆေးရုံကပေးလိုက်တဲ့ ရက်ချိန်းနေ့မနက် ၁၀နာရီလောက်ဆေးရုံ ရောက်ပါတယ်။ ဆေးရုံတခါထဲတက်ရပါ တယ် ။ ကောင်လေးက မလေးလိုရော အင်္ဂလိပ်လိုပါ ကောင်းကောင်းမပြောတတ်တာမို့ ကျွန်တော်မနက် တိုင်းဆေးရုံ သွားရပါတယ်။ (အန်တီတင့် မလေးရောက်တဲ့ရက်တွေမှာ ကျွန်တော်ဆေးရုံရောက်နေတာဖြစ် သလို၊ အလုပ်က ညဖက်အလုပ်၊ မနက်မိုးလင်းရင်ဆေးရုံသွားမို့ အိပ်ရေးတွေတော်တော်ပျက် ထားလို့လာ မတွေ့နိုင်တာပါ အန်တီရေ)။ တီဘီရောဂါလို့ ဆရာဝန်ပြောပါတယ်။ သူနဲ့တစ်အိမ်ထဲနေတဲ့သူတွေ၊ သူနဲ့အ လုပ်အတူလုပ်တဲ့ သူတွေအားလုံး တီဘီရောဂါရှိ၊ မရှိဆေးစစ်ခိုင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း သူနဲ့တ ပတ်ကျော်လောက် အတူသွားလာနေတာမို့ ဆရာဝန်က ဆေးစစ်ဖို့ပြောလာပါတယ်။ ဒီနေရာမှာကျွန်တော် တခုသွားပြီးသိလိုက်ရတာက တီဘီရောဂါဟာ အဲဒီလောက်ကူး စက်မြန်ပါလားဆိုတာပါပဲ။ အရင်ကသေ ချာမသိတော့ ကျွန်တော်ကြောက်ရကောင်းမှန်းတကယ် မသိခဲ့ပါဘူး။ အခုမှဆရာဝန်နဲ့ နေ့တိုင်းနီး ပါးတွေ့တော့ ဆရာဝန်ရှင်းပြမှ ဒီတီဘီရောဂါအကြောင်းကို သေသေချာချာ သိခွင့်ရလိုက်တော့မှ ကျွန်တော် တော်တော်ကြောက်သွားပါတယ်။ အရင်ကတော့ မျက်ကန်းတစ္တေမကြောက် ပေါ့ခင်ဗျာ။ အခုတော့ ကြောက်သွားပါပြီ။ ဆရာဝန်ရဲ့ထောက်ခံချက်နဲ့ လူနာကောင်လေးနဲ့ တစ်အိမ်ထဲနေသူတွေ အပြင် ကျွန်တော်ပါ တီဘီရောဂါပိုးရှိ၊ မရှိဆေးရုံမှာဆေးစစ်ရပါတယ်။ အားလုံးရောဂါမရှိသလို တီဘီရောဂါအ တွက်ဆေးစစ်ခ တပြားတချပ်မှမပေးခဲ့ရလို့ နှစ်ထပ်ကွမ်း ၀မ်းသာမိပါတယ်ခင်ဗျာ။ လူနာကောင်လေး လည်း ဆေးရုံ၁၀ရက်တက်လိုက်ရပြီး ၂၁ ရက်နေ့ဆေးရုံကဆင်းပါတယ်။ ဆေးဝါးကုသခ တပြားတချပ်မှ မပေးခဲ့ရပါဘူး ခင်ဗျာ။ အဲဒီဆေးရုံရောက်မှ တီဘီရောဂါနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးကြောက်စရာကောင်းကြောင်း၊ မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာ တီဘီရောဂါဝေဒနာသည် တယောက်ရှိနေရင် ဘယ်လိုကူးစက်ပြန့်ပွားလွယ်တယ်၊ ဘယ်လိုကာကွယ်ရမယ် ဆိုတာတွေကိုသိလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကျွန်တော် တို့အားလုံးမျက်စိတွေ၊ နားတွေဖွင့်ထားကြရပါမယ်။ မျက်ကန်း တစ္တေမကြောက် တွေမဖြစ်ရလေအောင် ကျွန်တော်သိလာခဲ့တဲ့ တီဘီရောဂါ အကြောင်းလေးဖြန့်ဝေချင်ပါတယ်။
အဆုတ်နာရောဂါ ဒါမှမဟုတ် တီဘီရောဂါဟာ လူတယောက်ကနေ တယောက်ကို လေထဲကနေပြန့်ပွား သွား တဲ့ ရောဂါပိုးတွေကြောင့် ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ ရောဂါတမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါကို အချိန်မှီဆေးမကုသရင် အသက်သေ ဆုံးနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
တီဘီရောဂါပိုးရှိသူ တယောက်က ချောင်းဆိုးရင်၊ နှာချေရင်၊ သီချင်းဆိုရင်၊ တံတွေးထွေးရင် ဒါမှမဟုတ် ရယ် လိုက်ရင် သူ့ရဲ့တီဘီပိုးတွေဟာ လေထဲမှာပြန့်နှံ့သွားပါတယ်။ အဲဒီတီဘီပိုးတွေရှိတဲ့လေကို တခြားလူတွေ ကရှုမိတဲ့အခါ အဲဒီတီဘီရောဂါကို ရသွားတတ်ပါတယ်။ အင်မတန်သတိထားရမှာပါ။
ကမ္ဘာတ၀ှမ်းလုံးမှာ လူပေါင်းခြောက်ဘီလီယံနီးပါး တီဘီဖြစ်စေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားရှိနေတယ်လို့ ကမ္ဘာ့ကျန်း မာရေးအဖွဲ့ (WHO)ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ နှစ်စဉ်လည်း ကမ္ဘာတ၀ှမ်းမှာ လူပေါင်းနှစ်သန်းလောက် တီ ဘီရောဂါ ကြောင့်သေဆုံးကြပါတယ်။ ဒီတီဘီရောဂါရှိသူတွေနဲ့ နေ့စဉ်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတဲ့ လူတွေ အနေနဲ့ ရောဂါကူးစက်ဖို့ အန္တရာယ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ အဲဒီအထဲမှာ မိသားစုဝင်တွေ၊ တစ်အိမ်ထဲအတူနေတဲ့ သူတွေ၊ အတန်းဖော် တွေ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ ပါပါတယ်။
ထကြွခြင်းမရှိတဲ့ တီဘီရောဂါရှိနေသူတွေမှာတော့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ တီဘီဖြစ်စေတဲ့ ဘက်တီးရီး ယားတွေရှိနေပေမယ့် ဒီဘက်တီးရီးယားတွေက ထကြွနေခြင်းမရှိဘဲ ဝေဒနာရှင်တွေ ကလည်းဖျားနာခြင်း မဖြစ်ကြပါဘူး။ ထကြွခြင်းမရှိတဲ့ တီဘီရောဂါရှိသူတွေက တခြားသူတွေကို ရောဂါမကူးစက်တတ်ပေမယ့် မကြာခင်မှာ တီဘီရောဂါ ထကြွလာနိုင်ပါတယ်။
ထကြွနေတဲ့ တီဘီရှိနေသူတွေကတော့ တီဘီရောဂါရှိနေပါပြီ။ ဆိုလိုတာက တီဘီရောဂါဖြစ်စေ တဲ့ဘက် တီးရီးယားတွေက တက်တက်ကြွကြွပွားများနေကြပြီး ခန္တာကိုယ်ထဲကတစ်သျှူးတွေကို ဖျက်ဆီးနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် သလိပ်မှာသွေးပါတာ၊ သွေးအန်တာတွေဖြစ်လာတာပါ။ ကျွန်တော့် ကောင်လေးရဲ့ရောဂါက ထ ကြွတဲ့ တီဘီရောဂါပေါ့ ခင်ဗျာ။ သူတို့တွေဟာ တခြားသူတွေ ပြန့်ပွားကူးစက်လွယ်ပါတယ်။
တီဘီဆေးတွေ မတိုးရခြင်းအကြောင်းကိုဆရာဝန်က အခုလိုရှင်းပြပါတယ်။ တီဘီရောဂါရှိသူတွေ ဟာ ဆရာဝန်ညွန် ကြားတဲ့အတိုင်းဆေးကို မှန်မှန်တစ်ရက်မပျက်ပဲ ကုန်အောင်စားရပါမယ်။ ဘာ အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေ ဆေးသောက်ခြင်းတစ်ရက်ပျက်ကွက်သွားရင် တီဘီပိုးဟာသောက် လက်စဆေး အပေါ်မှာခံနိုင်ရည်ရှိသွားပြီး အားကောင်းတဲ့တီဘီပိုး ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပထမဆုံးဆေးပတ် လည်အောင်မသောက်ခဲ့ရင် ဆေးဒဏ်ကိုခံနိုင်ပြီး အားကောင်းတဲ့တီဘီပိုးကို ပိုပြီးပြင်းတဲ့ဆေးတမျိုးနဲ့ အချိန်အကြာကြီး ဆက်လက်သောက်သုံးရမှာပါ။ ဒါကြောင့်တီဘီရောဂါသည်တွေအနေနဲ့ ပထမဦး ဆုံးဆေးပတ်ကို ဂရုတစိုက်မှန်မှန်သောက်သုံးသွားပါက ၆လအတွင်းပျောက်ကင်းနိုင်ပြီး၊ ပျက်ကွက်ခဲ့ မယ်ဆိုရင် အချိန်တွေ၊ ငွေတွေပိုကုန်သွားသလို လူအသက်အန္တရာယ်တောင် စိုးရိမ်ရတဲ့ ဆေးမတိုးတဲ့ တီဘီရောဂါဖြစ်သွားတတ်ကြောင်း သေချာရှင်းပြလို့ သိခွင့်၊ မှတ်သားခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
ဒီတီဘီရောဂါကို ပျောက်ကင်းအောင် ကုသလို့ရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကုသဖို့အချိန်နဲ့ လူနာအနေနဲ့ ဆေးမှန် မှန် သောက်ဖို့တော့လိုပါတယ်။ ဆရာဝန်ညွန်ကြားတဲ့အတိုင်း ရောဂါအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ၆လမှ ၁၂လ အထိ တစ်ရက်မပျက်ဆေးသောက်ရပါမယ်။ အရေးအကြီးဆုံးမှာ လူနာအနေနဲ့ဆေးကိုတစ်ရက်မပျက်ပုံ မှန်သောက်သွားဖို့ ပါ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ မိမိအနေနဲ့ တီဘီရောဂါရှိတယ် လို့ထင်တဲ့ သူတယောက်နဲ့ နီးနီးကပ်ကပ် ဆက်ဆံနေထိုင်ခဲ့ဘူးမယ်ဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် ၂ပတ်ကျော်လောက် ချောင်း တဟွတ်ဟွတ်ဆိုးနေတာ မပျောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင် တီဘီရောဂါစစ်ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
သူငယ်ချင်း ညီအကိုမောင်နှမတွေ အားလုံးတီဘီရောဂါကင်းဝေးပြီး ဘ၀အမောတွေပြေကြပါစေ။
Posted by ရာဇာထွေး at 9:50 PM
mstint July 3, 2012 at 11:03 PM
တီဘီရောဂါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပညာပေးမှတ်သားစရာလေးပဲ မောင်ရာဇာရေ။ အကြောင်းအကြောင်းလေးတွေကြောင့် တွေ့ဆုံခွင့်မရခဲ့ကြပေမယ့် တစ်ချိန်ချိန်တော့ ဆုံနိုင်ခွင့်လေးရှိလာအုံးမှာပါကွယ်။
ရာဇာထွေး July 4, 2012 at 4:49 AM
စံပယ်ချို July 4, 2012 at 1:42 AM
အမလေး---ပြောပြပါတော့လား သများအမြဲ ACTS ကိုသွားနေရတာလေ
ကိုယ်တိုင်မအားဘူးဖြစ်နေတာ (တီတင့်လာတဲ့အချိန်က ကိုယ်တိုင်နေမကောင်းဖြစ်ပြီးနားနေတဲ့အချိန်တိုက်တော့ သွားတွေ့လို့ရလိုက်တယ်) IPR အဆုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆေးရုံပဲ
အဲဒီကိုလဲ ရောက်တယ် လူနာကအရေးကြီးပါတယ်ကိုရာဇာရေ
လူနာကိုသာဦးစားပေးပါ- လူနာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကူလိုအပ်ရင်အချိန်မရွှေးပြောပါ အားမနာပါနဲ့
ဥရောပကလူတွေအားလုံး အင်တာဗျုးတွေမှာ တီဘီ ဖြစ်ဖူးလားကစတော့တာပဲကိုယ်တွေ့နော်
သူတို့က တီဘီကို အရာအားလုံးထက်ကြောက်ကြတယ်
ရာဇာထွေး July 4, 2012 at 4:54 AM
ကောင်လေးကအမ တို့ဘော်ဒါကြီး ကိုငွေသွား ရဲ့တူလေးပါ..
ယူအမ် ရတယ်အမရေ :)
ချစ်စံအိမ် July 4, 2012 at 4:38 AM
ဖတ်သွားပါတယ် အကိုရေ.. ကျန်းမာရေးလည်းဂ၇ုစိုက်ပါ
ရာဇာထွေး July 4, 2012 at 4:56 AM
ဆရာလေးမှားနေပြီ.. ဒီပြန်ပြောရမှာ ကျန်မာရေးဂရုစိုက်ပါဆိုတာလေ..
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် July 4, 2012 at 11:31 AM
ကြည်ဖြူခင်ခင် July 4, 2012 at 6:05 PM
နောက်ဆို ချောင်းဆိုရင်လည်း ပေါ့တန်တန်မထားမိတော့ဘူးပေါ့.. ရောဂါရှိနေသူကိုလည်း မှန်းပြီး ဂရုစိုက်နိုင်တာပေါ့အကိုရေ.. word မှာ ကော်ပီကူးရင်း.. သိမ်းထားလိုက်ပါတယ်.. သူငယ်ချင်းတွေကို ဗဟုသုတပြောပြလို့ရတာပေါ့အကို.. မှတ်သားစရာအတွက် ကျေးဇူးပါ အကိုရေ...
Maribel Artaste August 1, 2012 at 12:36 AM